Ungayifaka njani i-Samsung Galaxy mini uthotho nge-odin | I-Androidsis
Kwi elandelayo uqeqesho lwevidiyo, Ndizokufundisa indlela yokukhanyisa nge-odin yokukhuphela izinto ezininzi, I-Samsung galaxy mini uthotho.
Kukho iimodeli ezininzi zesiphelo Samsung, kodwa Inkqubo edanyazayo iyafana kubo bonkenjengoko isixhobo sisetyenziswa odin yokukhuphela izinto ezininzi i-4.38.
Into yokuqala ekufuneka siyenzile, njengoko ndibonisa kwividiyo entlokweni, iya kuba kukubhalisa kwiphepha le- khamefm.com, ukusukela apho siya khona fumana zonke izixhobo eziyimfuneko zokukhanyisa isiphelo sethu.
Nje ukuba sichongwe ngegama lethu lomsebenzisi kunye negama lokugqitha, siya kuqhubeka nokukhuphela yonke into eyimfuneko:
2 Inkqubo ye-Samsung Galaxy mini ekhanyayo
Into yokuqala ekufuneka siyenzile khuphela abaqhubi abahambelana nemodeli yefowuni yethuEmva kokukhutshelwa, siya kuzifaka kwaye siqale ikhompyuter.
Into yesibini esiza kuyenza yile khuphela izixhobo eziyimfuneko zokukhanyisa isiphelo sethu, kule meko iya kuba yifayile ye- odin yokukhuphela izinto ezininzi eza kunye nefayile TASS.OPS.
Ekugqibeleni thina siya kukhuphela i-firmware esifuna ukuyikhanyisa.
Nje ukuba ukhuphele yonke into oyifunayo, Siza kukhupha iifayile kwi-zipUkuba ngaba omnye wabo usibuza ngegama eligqithisiweyo, beka zamfirmware.com,
Inkqubo ye-Samsung Galaxy mini ekhanyayo
Siya kwifolda izixhobo ezidanyazayo y sisebenzisa i-odin yokukhuphela izinto ezininzi njengabalawuli:
Ngoku siza kubeka iifayile ngolu hlobo lulandelayo:
Kwibhokisi I-PAHO siza kubeka ifayile TASS.OPS esinokuyifumana kwifolda equlathe odin.
Kwibhokisi IBHODI siza kubeka ifayile I-APBOOT esinayo kwifolda ye-firmware.
Kwibhokisi PHONE siza kubeka ifayile yeMODEM esiya kuyifumana kwifolda ye-firmware.
Kwibhokisi PDA siza kubeka ifayile CODE esinayo kwifolda ye-firmware.
Kwibhokisi CSC siza kubeka ifayile CSC esikwanayo kwifolda ye-firmware.
Siza kujonga ukuba yonke into iyasifanela na njengoko ndikubonisa yona umfanekiso weskrini phantsi:
Ngoku besizakuyicima I-Samsung Galaxy mini kwaye besiyilayita Imowudi yokukhuphela, (IVolumu phantsi + iqhosha eliphakathi + namandla).
Siza kuyidibanisa nekhompyuter ngentambo ye-usb kwaye singacinezela iqhosha lokuQala, ngeli xesha inkqubo yokudanyaza iya kuqala, ayinakutsho ukuba ngelixa le nkqubo ikhankanywe ngasentla iqhubeka Akufanele sikhuphe iselfowuni okanye sicime ikhompyuter, njengokuba singenakukuvumela ukuba ungene indlela yokulala okanye yokulala.
Inkqubo ithatha malunga nemizuzu emihlanu, Siza kuqonda ukuba yonke into iphele kakuhle, xa i-odín, ngasentla ngasekhohlo sixele igama elithi PASS.
Ngelo xesha sinako unqamle iselfowuni kwaye ulinde ukuba iqale kwakhona, Nje ukuba siqalise ngokutsha siza kuba nohlobo olukhethiweyo khamefm.com.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Indlela ukuvula Samsung Galaxy mini ngokupheleleyo simahla
Ukukhuphela - sammobile.com
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Indlela yokutshintsha i-Samsung Galaxy mini uthotho nge-odin yokukhuphela izinto ezininzi
Ndiyabulela kakhulu, iwele njengeglavu, kuba bendifuna ukukhanyisa i-galaxy mobile yam
UAndres Felipe Vasquez sitsho
Enye indlela yokususa isitena kum galaxy mini
Phendula u-Andrés Felipe Vásquez
Yintoni ekufuneka uyazi ngokuthe ngqo?
emva kokusebenzisa i-odin ikhusi alinanto.
Phendula p. Jorda
UJose Armao sitsho
Imini emnandi zihlobo ndinengxaki. namhlanje i-samsung mini s4 gt-i9192 yam yandivusa kwilogo yesamsung kwaye ayenzekanga. emva koko khange iphinde ivule. Ukuba umntu angandinceda ndingabulela kakhulu
Phendula ku jose armao
Ngaba inkqubo ithatha kuphela imizuzu emi-5? Ndenze yonke into njengoko benditshilo kwividiyo kwaye ithatha imizuzu eyi-18 kwaye akukho 5% eluhlaza kwisakhelo! Kuya kufuneka ubone ukuba kuye kwafuneka ndibhenele koku kuba emva kokufomatha kwimenyu ye-Android (hayi kwimenyu yefowuni) ayikhange ivuleke kakuhle? (Ndiqhubekile ndifumana i-Samsung kunye nemovistar into, kodwa ayizange indibuze ipini kwaye yangena kwiluphu ..)
Ukwenza? Ngoku ukwimo yokukhuphela!
Into yokuqala kukwazi ukuba ngaba unabaqhubi abafakiweyo, emva koko ujonge ukuba ubeka zonke iifayile ngokuchanekileyo kwi-odin.
Ukuba ufake nje abaqhubi be-Samsung, incam, qala ikhompyuter yakho ngaphambi kokukhanyisa.
Ayisebenzi. Ngendlela ... ubeka phi i-firmware?
Yiyiphi i-firmware?, Yonke into ichazwe kakuhle kwividiyo, yonke into yenziwa nge-odin kunye nokubeka iselfowuni kwimowudi yokukhuphela
Kungenxa yokuba akukho folda iphumayo xa uziphu. Kwenzeka into efanayo nakum. Kuphuma kuphela -S5570LWMKPM_S5570LSAMKP6_S5570LWMKPM_HOME.tar.md5
kwaye andazi ukuba ndibeke phi.
isonjululwe. Ndenze inketho "yePakeji enye" ​​kwaye ndayibeka ifayile emazantsi ayo yonke into apho ithi Iphakheji enye. Isebenzile.
Molweni, ndiyifumene iselfowuni eteksini kwaye iza ne-wifi embi, ukuba ndiyakhanyisa inokuphinda isebenze?
Christian velez sitsho
Phendula uChristian Velez
Ndikhuphele i-firmware ye-GT-S5570L - ePeru (SAM) kwaye xa ndiyivula unzip uneefayile ezimbini kuphela:
Kufuneka wenze ntoni kule meko?
Ndinengxaki efanayo neyakho, Phendula IMPENDULO. Enkosi
nam, uyasifumana isisombululo?
wazi njani umntu ??? Andifumani iifayile zimbini enye into ...
Kule meko kusetyenziswa ifayile ye -tar kuphela kwaye iya kwi-PDA.
Nge-06/05/2013 ngo-07: 34, «Disqus» wabhala:
Isonjululwe. Kuya kufuneka ukhethe ukhetho lwePakeji enye kwaye ubeke loo fayile emazantsi ayo yonke into, apho ikwatsho ukuba yipakeji enye.
Isebenze ngoluhlobo kum.
Ubeka ifayile -S5570LWMKPM_S5570LSAMKP6_S5570LWMKPM_HOME.tar.md5 kwibhokisi ye-pda kwaye kuphela yi-autoreboot kunye neef.
Molo mini yam yomthala ndiyishiye ngaphezulu kwemizuzu engama-200. kunye ne-odin kwaye indinike ixesha lokudlula kwaye ifowuni yam ephathekayo ishiywe ngescreen sepc .. impazamo yoqhagamshelo .. kunye nee icon zeselfowuni. Ndiyibuyisela njani esiqhelweni ?!
Iphepha leSAMMOBILE alibonisi nanye kuloo nto! 🙁 Zama ukutshintsha i-Rom ye-GT s5570L yam kwaye ijike ithi samsung kwaye emva koko ixhonywe ngescreen esimhlophe
Ndinomthala wam omncinci omiliselwe kunye ne-Latin American cyanogenmod7 kodwa andiyithandi kwaye ndifuna ukubuyela kwi-firmware yasimahla ye-peru yokukhupha ii-flash application zipholile ... kufanele ukuvela ezine onokukhetha kuzo emva koko uzibeke kwi-odin kwaye akukho nto ivele kwezi fayile zimbini .. Ungandidlulisela kwifolda ye-firmware esele ivuliwe? Ngeefayile ezine? Iselfowuni yam ngumthala omncinci we-GT-S5570L peru. Ndiyakubulela kwangaphambili. Imeyile: pacum_q@hotmail.com
UIvan Escalera sitsho
Molo, ndiza kuyichaza kancinci ingxaki yam, iselfowuni yam ikwisikrini sasekhaya esidanyazayo, ndizama ukubuyisela nge-odin edanyazayo nokuba yintoni kwaye xa ifikelela esiphelweni iselfowuni ihlala injalo, inika impazamo yexesha elidlulileyo ingayenza
Phendula uIvan Escalera
Into yokuqala ekufuneka yenziwe kukujonga ukuba ngaba unabaqhubi abafakelwe ngokuchanekileyo,
Nantsi ipakethi yomqhubi weWindows, ubuyisele kwakhona kwaye * uyiqale kwakhona iPC * ngaphambi kokuba uqalise inkqubo ekhanyayo ngeOdin.
Molo, sendibafakile abaqhubi kwaye yonke inkqubo iyafana, kwaye xa ufaka enye i-PDA, kulapho kufuneka ndiqale khona, iyacima kwaye iqala ukudanyaza ide ibeke igama lokudlula kwaye i-avajo ibeka ixesha-lidlulile IsiNgesi.
Molo mvakwemini ndithetha ndisuka eColombia ndinetafile zte v9 imiboniso, isiqingatha sescreen ngenxa yenkqubo embi ye-rom ngoku ukubamba akusebenzi kwaye andinakuyishiya kwimowudi ye-FTM kufana nezitena ezinokundinceda (I Sele ndizamile ukuyishiya ikwimo ye-FTM ngezitshixo zevolumu ok) ngubani onokundinceda ok
Ndinepilisi ye-zte v9 kwaye ibonisa isiqingatha sesikrini kwaye ukuchukumisa akusebenzi ngenxa yegumbi elibi elidlulileyo ???? Ngaba umntu unokundinceda nceda sele ndizamile ukuyifaka kwimodi yokukhuphela kunye nezitshixo zevolumu kwaye akukho nto ayisebenzi kwaphela Kungenxa yoko le nto bendixelela ukuba le yejtag, ucinga ntoni, sihlobo?
mhlobo ungandinceda nge-samsung galaxy s2 kuba ihlala ikhuphela umbuliso ovela eMexico
enkosi kunye newaka enkosi, ndiyisombulule ingxaki yam enkosi kule vidiyo intle kangaka.
Edwin Arias 1982 sitsho
Molo mhlobo, ndicela uxolo, ungasenza isifundo se-galaxy ace duos kwiphepha le-sammobile, ndifumana kuphela i-firmware hayi iifayile zokukhanya.
Phendula uEdwin Arias1982
emilio trascastro sitsho
molo ulungile, ndiyenzile into ebonakala kwividiyo, kodwa ngoku iselfowuni ayenzi umnxeba, ayindibuzi nokuba ndiyivule, ngaba ungandinika isandla?
Phendula emilio trascastro
Ngaba oku kuyasebenza kwisamsung galaxy s3 MINI ?? Kungenxa yokuba kwiwebhu andiboni kubaqhubi okanye nantoni na yale fowuni, Thixo, ndijijekile, iselfowuni yam ayivuli kwaye ikwimeko yempazamo enxantathu omthubi kuba ukubuyela kwakhona akungeni kum, kungena kuphela kum kwimowudi yokukhuphela kwaye akukho nto ngaphandle kokuhambisa ukuba umntu uyanceda ndiyayixabisa
Kuya kufuneka ujonge i-firmware yemodeli yakho yefowuni kwaye uyikhanyise nge-odin, ukuba akunjalo ungazama kwi-Kies ngokudibanisa iselfowuni kwikhompyuter kwimowudi yokukhuphela
Ndinengxaki, i-MIBIB ayenzeki kum, ihlala apho… nasiphi na isisombululo?
Xa ukhuphela ifayile kwaye ufake ipassword samfirmware.com ayenzi decompress nantoni na
Ndinesitena esivela kumzuzu wam we-samsung, ndilayishe i-odin eninzi kodwa ihlala isenzeka into enye iqala kude kube yi-SAMSUNG window. Ndingangena kwimowudi yokukhuphela kodwa ndingabuyisi.
Naluphi na uluvo ungayilungisa njani?
UManuel Andre Vargas sitsho
Uxolo, ngaba unokubeka ikhonkco lokukhuphela kubaqhubi? Kwiphepha andifumani elinye ngaphandle kwelokugqibela.
Phendula uManuel Andre Vargas
Ndingayitshintsha njani i-imei yam samsung galaxy mini
Kum, iphepha le-sammobile lahlukile ati kwaye yonke into ibhalwe ngesiNgesi kwaye andazi ukuba ndiyenza njani iakhawunti.Kutheni yahlukile?
Iijoker ze-Android sitsho
Molo, uxolo, kutheni ungandivumeli ndingene nantoni na xa ndingena?
Phendula kwi-joker ye-android
UCezuki Correa sitsho
xa ndisebenzisa i-odin ukukhanyisa i-samsung galaxi mini gt s55570, ngokulandela onke amanyathelo .. Ndiqhagamshela iselfowuni kwimowudi yokukhuphela kwaye ndicinezela inkwenkwezi peru kwimizuzu emi-2 yenkqubo iselfowuni icima umlaleli iyanyamalala kwaye inkqubo iyayeka kwaye ndiyakwazi Ayikho enye into oyenzayo…. ndicela uncede kutheni le
Phendula Cezuki Correa
Molo, ndibuza ukuba kutheni iphepha le-sammobile lahlukile kuleyo ibonakala kuwe kwiscreen, apho ndingena khona ingandiniki ukhetho lokukhutshelwa komqhubi.
Kungenxa yokuba iphepha lahlaziywa ngexesha elidlulileyo.
Khuphela kwaye ufake iiKies ukuqinisekisa ukuba unabaqhubi
Nge-13/10/2013 ngo-17: 55, «Disqus» wabhala:
UJose dekker sitsho
Molo uFrancisco, undixelele ukuba ndingayifumana phi into endiyifunayo ukuze ndikhanyise i-mini2, njengoko bendisitsho kuwe, ndihlala ndisiba namandla kwaye ayenzeki ukusuka apho, andinakho ukufikelela kwimisebenzi kunye neefayile ozichazayo kwisifundo andizifumani ukuba ndizikhuphele.
Kwaye ucebisa ntoni ukuba ubuyise iselfowuni yam?
Phendula kuJose dekker
Kwi-sammobile, abaqhubi kunye neeflashprograms zokungena azisekho.
Umhlobo ukhanyise i-samsung mini dart sgh-t499 kwaye yaqina apho ithi i-QCSBL khuphela umbono othile ngendlela yokulungisa umbulelo ngoncedo
Molo, ndivele ndakhanyisa i-sgh-t499 yam kodwa ayigqibi ukuqala, ihlala kwilogo yesamsung kwaye andinakungena kwimowudi yokubuyisela kuba ihlala kwiscreen esimnyama, ngaba ukhona umntu owaziyo isisombululo?
Ungandithumelela ikhonkco labaqhubi be-galaxi mini gt-s5570, kuba andikwazi ukubhalisa
Mholo. Eli phepha lihle kakhulu. Nangona kunjalo, ndizama ukungena SAMMOBILE kodwa iphepha litshintshile okoko ividiyo yarekhodwa. Ndizama ukukhuphela i-SAMSUNG GALAXY MINI GT-S5570I yonke into endiyifunayo ukuze ndingaqhoboshi kwaye ndiyikhanyise, kodwa i-FLASHPROGRAM okanye i-DRIVERS tab ayiveli. Ndingazifumana njani izinto eziyimfuneko ukuze ndikhawuleze ifowuni, nceda? Imeyile yam yile luiscanamerocamara@hotmail.com
Ndingena njani kwiphepha labaqhubi ???????
Andifumani phepha linye livela kwividiyo kwaye sele ndibhalisile.
U-Luis J sitsho
Imibuliso, Okokuqala kule bhlog. Okoko ndakhokelayo, ukuze ndikwazi ukufumana i-Samsung SGH-T679 ye-Android 2.3.6 baseband T679UVLK2 T-MOBIL USA Iselfowni ephuma kwiBrick.
Amanyathelo endiwathathileyo aba: okokuqala, umonde, ukunyamezela okuzolile.
A. - Khuphela iFirmware yemodeli yakho kwiphepha eliboniswe kule Bhlog http://www.sammobile.com/firmwares/
Kuya kufuneka ubonise imodeli yeselfowuni kwimeko yethu ye-SGH-T679 emva koko ukhethe i-firmware efanelekileyo yemodeli yakho.
Emva koko vula iziphu naphi na apho ufuna khona.
B. - Khuphela u-Odin V4.43 kwaye ufake kwi-PC.
C. - Khuphela kwaye ufake i-USB Drayivu ye-Samsung SGH-T679 kwiphepha: http://www.samsung.com/us/support/owners/product/SGH-T679DBBTMB
D.- Qala kabusha iPC yakho (Khumbula ukuba ndisebenze kwiLaptop yam eqhuba isiKhaya seKhaya seWindows 7.
Emva koko Yenza amanyathelo aboniswe kwiVidiyo yale Bhlog.
Ukudityaniswa kwamaqhosha ukubeka iselfowuni kwiFomu yokutshaja kwakhona kukucinezela ngaxeshanye: Volumu ezantsi okanye ngaphantsi + Amandla + Ekhaya (Isitshixo esinebhokisi kwaye ezimbini ngqo ngaphakathi. Yokuqala ukusuka ekhohlo ukuya ekunene. )
Khumbula kufuneka uqale, Umonde, ukuzola, uPhando kunye nokuzingisa ukuze uphumelele.
F.- Ukusuka kwifayile T679UVLK2_T679UVLK2_T679UVLK2_HOME.tar.md5 okanye kwifayile oyikhuphelayo, khupha kulawulo olufanayo kwifayile enokongezwa kwe * .OPS kwimeko yam inegama le-ANCORA.OPS.
G.- Vula i-Odin V4.43 linda umzuzu. Apho ithi Khetha i-OPS apha ngezantsi kukho ibhokisi enekhowudi ye-OPS, cofa kuyo kwaye ujonge isikhombisi apho unefayile ye-OPS.
H.- Cofa kwibhokisi ye-CSC engezantsi kwaye ubeke i-firmware efanelekileyo kwimodeli yakho, linda umzuzu.
- Faka i-USB kwiCellphone yakho, linda imizuzu emibini ucofe iqhosha lokuQala.
Emva koko ulwe.
Ndiyenzile Emva koSuku lokunyamezela. !!!!!
Phendula uLuis J
Molo ngoku ikhompyuter yam yi-mini s4 i9192 kwaye iyaqala kwakhona kwaye ndifuna ukuyilayita kwaye ndiyayenza kodwa iyaqhubeka ukuqala kwakhona, ndingathanda ukwazi ukuba ikhona iFirmware kodwa ngokwahlukeneyo kwi-odin kwaye ukuba ikhona, nceda uyinike mna
Ndiyifumana phi i-firmware kunye nabaqhubi?